यस्ता छन् जाडोमा घाम ताप्नुको फाइदा र बेफाइदा ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
यतिबेला देशभर चिसो बढीरहेको छ । चिसोको कारण यो बर्षमा तराइमा २ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने शितलहर बल्ल सुरु भएको छ ।
हामीले जाडोबाट बच्नको लागि तातो घाममा बस्ने गछौं । जाडोमा तातो घाममा बस्न सबैलाई मन पर्छ । हिन्दू धर्ममा घामलाई सूर्य देवता मानेर पूजा गर्ने र जल चढाउने प्रचलन छ ।
घामको धार्मिक मात्र नभइ बैज्ञानिक महत्व पनि रहेको छ ।घामले हाम्रो शरीरलाई तातो मात्र नभई प्रयाप्त मात्रामा भिटामीन डी पनि प्रदान गर्दछ । स्वास्थ्य बिज्ञका अनुसार घामले विभिन्न इन्फेक्सनबाट विरामीलाई जोगाउँछ ।
विशेष गरी नेपालमा मंसिर, पुस र माघको समयमा धेरै नै जाडो हुने भएकाले घाममा बस्न सबैलाई मन पर्छ । घाममा बस्नाले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको बिकास हुने स्वास्थ्य विज्ञको भनाई छ ।
कोरोनाका विरामीलाई पनि शारीरिक अनुकुलता र अवस्था हेरेर घाममा बस्नाले पनि फाइदा नै हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
विशेष गरी भर्खर जन्मेका बच्चाहरुको लागी घामको महत्व निकै रहेको छ । विश्वका सबै देशमा एकै किसिमको हावापानी नहुने हुँदा मौसम पनि फरक किसिमको छ ।
नेपालमा भने मंसिर, पुस,माघ र फागुन महिनामा बढी मात्रामा घाममा बस्ने गरिन्छ । यी महिनामा नेपालमा जाडो हुन्छ । तर पनि घामको महत्व भने सबैतिर उत्तिकै छ । खासगरी विहानको घाममा बस्दा शरीरलाई फाइदा हुन्छ ।
२.शरीरको तौल घटाउन
३. राम्रो निद्राको लागि घाम
घामको फाइदा सँगै बेफाइदाहरु पनि छन् । जाडोको समयमा जति नै घाम प्यारो भएपनि गर्मीको समयमा घाम कसैले रुचाउँदैनन् । घाम ताप्दा फाइदा भएपनि घाममा लामो समय बस्दा बेफाइदा हुने गर्दछ ।
घाममा धेरै समय बस्दा हुने बेफाइदाहरु यस्ता छन् :
विभिन्न किसिमका रोग लागेका व्यक्तिहरुले चिकित्सकसंग आवश्यक सल्लाह गरेर मात्रै घाममा बस्नुपर्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति: Jan 6, 2022
सावधान् ! अण्डासँग यी कुरा भुलेर पनि नखानु जसले ज्यानै जानसक्छ !
अण्डा हामी सबैको रोजाइमा पर्ने खाद्यय बस्तु हो । अन्डा मानिसको स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक
एन्टीबायोटिक औषधीले काम गर्न छोड्यो, संसारभरी लाखौँको मृत्यु : अध्ययन
एन्टीबायोटिक औषधीले काम गर्न छाडेर संसारभरी लाखौँको मृत्यु भएको एक अध्ययनले बताएको छ । एन्टीबायोटिक
थापापाउनुहोस् : ओमिक्रोन संक्रमितमा देखिन्छन् यी २० लक्षण !
पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा ओमिक्रोन भेरियन्ट
कालो नुन खादाँ हुन्छन् यी फाइदा जान्नुहोस् !
हामी सबैले नुन प्रयोग गर्ने गछौं । नुन सामान्यतया सबै घरहरूमा प्रयोग गरिन्छ, धेरै कम
जान्नुहोस् : पायल्सको उपचारको लागि लेजर सर्जरी कति सुरक्षित छ ? थप उपचार के के हुन् ?
पायल्स पछिल्लो समयमा आम मानिसलाई समस्याको रुपमा देखिएको छ । बदलिदो बातावरण साथै खानपिनको समस्याको
जान्नुहोस् : श्रीमतीलाई यौन सन्तुष्ट पार्ने यस्ता छन् तरीका !
सेक्स मानिसको लागि अतिआवश्यक कुरा हो । सेक्सविना कुनै प्राणी बस्न सक्दैन । अझ दाम्पत्य